Wondershare MobileTrans User Guide - Kies ndabere ka Android
MobileTrans Guide: Kies ndabere ka Android
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị android ngwaọrụ gị na kọmputa na iji eriri cables na-eche maka ngwaọrụ ghọtara site Wondershare MobileTrans.
Nzọụkwụ 4. Họrọ faịlụ ị ga-achọ nyefee si dị ndabere faịlụ na ekpe. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ faịlụ ị ga-achọ nyefee, pịa "Tinye ndabere File" n'ihi ọzọ nhọrọ.
Nzọụkwụ 5. Pịa na "Malite Copy" iji malite usoro. Na-igwe ejikọrọ na usoro ahụ.
I nwekwara ike ikpebi ihichapu ebe ngwaọrụ tupu edegharị ọ bụla faịlụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke a; nanị ego na "Doro Anya data tupu oyiri" igbe dị n'okpuru ebe ekwentị.
Ọzọ: Blackberry ndabere ka iOS